बालुन डी'ओर मा परिवर्तन भएका नियमहरु
बालुन डी’ओर मा परिवर्तन भएका नियमहरु
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स संबाददाता March 15, 2022
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौँ| फ्रान्स फुटबलले यस संस्करणबाट बालोन डी’ओर अवार्ड अघि धेरै पक्षहरुमा सुधार गरेर समारोह आयोजना गर्ने गत शुक्रबार घोषणा गरेको छ।
पेरिस सेन्ट-जर्मेनका फरवार्ड लियोनल मेस्सीले नोभेम्बरमा सातौं पटक कीर्तिमान विस्तार गर्न अवार्ड प्राप्त गरे भने बार्सिलोनाकी एलेक्सिया पुटेलासले बालोन डी’ओर फेमिनिन दाबी गरेकि थिईन।
यद्यपि यो अवार्ड भने, मेस्सीको जित थियो जसले बायर्न म्युनिखका रोबर्ट लेवान्डोस्की र लिभरपुलका मोहम्मद सलाहलाई पछि पारेपछि विवादमा परेको थियो।
चौतर्फी आलोचना भएपछि फ्रान्स फुटबल म्यागजिनले यस पटकबाट केही कुरा परिवर्तन गर्ने जनाएको छ।
सर्वप्रथम, पुरस्कार अवधि सम्पूर्ण क्यालेन्डर वर्षको सट्टा मुख्य युरोपेली सिजनको साथमा हुनेछ।
यस वर्षको अवार्डले ग्रीष्ममा महिला युरो २०२२ टूर्नामेंटको साथ समाप्त हुने २०२१-२२ अभियानमा फुटबलरहरूको प्रदर्शनलाई मात्र ध्यानमा राख्नेछ।
फलस्वरूप, नोभेम्बर र डिसेम्बरमा कतारमा हुने पुरुष २०२२ विश्वकपको प्रदर्शनलाई २०२३ पुरस्कार समारोहको लागि मात्र ध्यान दिइनेछ।
दोस्रो, मतदानमा संलग्न पत्रकारहरूका साथै पूर्व चेल्सी र आइभोरी कोस्ट स्टार डिडियर ड्रोग्बालाई प्रक्रियामा थपिएको छ। ड्रोग्बा पनि उम्मेदवारहरूको थप संरचित सूची कम्पाइल गर्न ट्रू आन्ह न्गोक र चेक क्यारोलिना ह्लाभाकोभासँग सामेल हुनेछन्।
तेस्रो, पुरुष अवार्डका लागि फिफा वरियतामा पहिलो १०० देशका प्रतिनिधि र महिलातर्फ पहिलो ५० देशका प्रतिनिधिले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्।
अन्तमा, विजेता निर्णय गर्ने मापदण्ड परिवर्तन भएको छ, किनकि पुरस्कारले खेलाडीको व्यक्तिगत प्रदर्शनलाई मात्र विचार गर्दैन, तर सामूहिक प्रदर्शन, खेलाडीको “वर्ग” र उनीहरूको निष्पक्ष खेल रेकर्डलाई पनि ध्यानमा राख्नेछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विजेताको लागि मतदान गर्दा खेलाडीको प्रतिष्ठा र विगतका वर्षहरूमा प्रदर्शनलाई विचार गरिने छैन।
अवार्डमा भने पछिल्लो डेढ दशकमा अर्जेन्टिनी स्टार् लियोनल मेस्सी र पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको बर्चश्व रहेको छ।
मेस्सीले गत सिजनको बालुन डी ओर सहित कीर्तिमानी सात पटक यो अवार्ड जितेका छन् भने क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नाममा पाच अवार्ड रहेको छ।
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, फुटबलTagged #hamro nepal sports #Messi #ronaldo
रोनाल्डोले रियल छाडेदेखि च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलमा खेलेका छैनन्
च्याम्पियन्स लिगमा असफलता थप्दै म्यानचेस्टर युनाइटेड ट्रफी बिहिन यात्रामा फर्किएको छ। एटलेटिको बिरुद्ध समग्रमा २-१ हार बेहोर्दै युनाईटेडले यो सिजनका सम्पूर्ण प्रतियोगिताहरुलाई बिदाई गरिसकेको छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोका लागि यो प्रतियोगितामा नयाँ झट्काको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनले रियल म्याड्रिड छाडेपछि सेमिफाइनलसम्म नपुगेका चार सिजन खेलेका छन्। रोनाल्डोले रियल संग बस्दा हरेक सिजन […]
मेस्सी कीर्तिमानी सातौं पटक बेलुन डी ओर बिजेता घोषित!
इन्स्टाग्राममा ४०० मिलियन फलोवर्स हुने रोनाल्डो पहिलो व्यक्ति
म्यानचेस्टर युनाइटेडले रोनाल्डो सामु राख्यो दुइ बर्षे प्रस्ताब !!
के हो त युरोपियन सुपर लिग बिबाद ? कुन कुन टोलि हुदैछन प्रतिबन्धित ?
राल्फ राग्निक भन्छन आवश्यक परे एघारै खेलाडी किन्न तयार
उत्कृष्ट हुदाँहुदै पनि भारत बिरुद्ध जितविहिन नेपाल